Radio Don Bosco - Finoana aina
Loza ny fampitsaharana vohoka
Naseho ny : 18 febroary 2022
Loza ho an'ny soatoavina moraly maha-olona ny fampitsaharana vohoka. Ny kalitaon'ny aina dia tsy manan-danja mihoatra ny hasin'ny aina maha-olona.Tsy mampihena ny hasina maha-olona ny fiiban'ny kalitaon'ny aina. Noho izany, ny fahasembanana ny zaza ao am-bohoka dia tsy afaka manamarina velively ny fandatsahana ny ainy. Fandaharana momba ny hasin'ny aina iarahana amin'i P. Nicholson Avotriniaina, Doctorant en théologie morale, Université Pontificale Urbaniana
soatoavina moraly maha-olona
Maria nampiakarina any an-danitra
Naseho ny : 11 febroary 2022
Teny finoana ho an'ny Eglizy katolika ny nampakarana any an-danitra i Masina Maria, izay nambaran'ny Papa Pie XII tamin'ny alalan'ny constitution apostolique "Munificentissimus Deus", ny 01 novambra 1950, constitution apostolique. Ilay Renin'Andriamanitra virjiny madio indrindra, rehefa nahavita ny fiainana teto an-tany dia nakarina vatana sy fanahy any amin'ny voninhaitry ny lanitra. Fandalinana momba an'i Masina Maria miaraka amin'i P. Hervé Solofoarimanana
nampakaina any an-danitra
Eglizy mahantra ho an'ny mahantra
Naseho ny : 4 febroary 2022
Mampahory ny vahoaka ny fanararaotam-pahefana ataon'ny mpitondra, araka ny voalaza ao amin'ny Soratra Masina. Ory sy fadiranovana ny vahoaka noho ny fitiavan-tenan'ny mpitondra. Tokony hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra anefa ny mpitondra vahoaka. Manoloana ny fanompoana ny vola sy ny fangatsiakam-pon'izao tontolo izao dia tokony manana toe-po mahantra ny Eglizy, izany hoe tsy manao ampihi-mamba, mijery manokana ny mahantra. Fandalinam-pinoana miaraka amin'i Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, Évêque auxiliare d'Antananarivo
Fahasoavana ny fanambadiana
Naseho ny : 28 janoary 2022
Ny tsy fitovian’ny finoana arahina eo amin’ny mpivady dia tsy mampisy vato misakana tsy azo ihoarana ho an’ny fanambadiana, raha vitan’izy ireo ny manakambana an’izay noraisin’ny tsirairay tamin’izy ireo tao amin’ny Fiangonany sy mampianatra ny andaniny sy ny ankilany ny fomba izay niainan’ny tsirairay ny fifikirana amin’i Kristy. Fandalinana momba ny Fanambadiana kristianina, miaraka amin'i P Randriamanamahenina Robert Marie.
tsy mitovy finoana
Pejy 1 amin'ny 13